Ukholifulawa isibe hhayi isivakashi ezingavamile etafuleni lethu. Ukwazi indlela ukupheka kahle ukholifulawa, kungenziwa kuphekwe ukuphuma kuso okuningi sokudla okwehla esiphundu futhi unempilo. On the izakhiwo ezuzisayo kwalo mkhiqizo yaziwa isikhathi eside. Liqukethe eziningi amavithamini kanye compounds amaminerali. Ngaphezu kwalokho, njenganoma yikuphi ukholifulawa yemifino iqukethe esiningi amaprotheni, kuyilapho ziba usizo ikhalori ongaphakeme. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi indlela ukupheka ukholifulawa ukugcina umsoco namaminerali abaqukethwe.
Zonke imifino abacebile kakhulu amavithamini. Kodwa-ke, ungayisebenzisi isilovela kakhulu njengoba injalo iluhlaza. Ngakho-ke, babhekana ukufudumeza ukwelashwa. Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi isikhathi eside ukuchayeka ezishisayo zonke izici ezibaluleke wabhubhisa cishe ngokuphelele. Indlela ukupheka ukholifulawa kuso walondoloza yonke amavithamini?
Bilisa ukholifulawa kufanele kube imizuzu akukho kuka 5-7. Indlela yokwelapha esebenza ngaphezulu eside, kuba ngaphansi ewusizo. Ngaphambi ukwelashwa ukushisa kumele zezikhali ukholifulawa ku florets. Kungenzeka futhi futhi bekungamelwe niziyeke ke esikhathini esithile usawoti, amanzi abandayo. Lokhu kuzokwenza balahle izinambuzane ezingase ukwethula kuwo. Ngo amanzi abilayo eyehlisiwe inflorescence upheke isikhathi esibekiwe. Cover isivalo imbiza akudingekile. Ngemuva kwemizuzu engu-5-7 udinga ukuthola ukholifulawa emanzini bese ulahla e colander ukuze ingilazi uketshezi ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, kwathi ingalungiswa kusuka ezihlukahlukene izitsha.
Uma upheka kufanele bacabangele ubukhulu inflorescence. Kufanele abe amathuba afanayo. Lokhu kuzovumela inflorescence ngamunye ubilise ngokulinganayo.
Ungadliwa ukholifulawa kakhulu. It is kahle kuhlanganiswe neminye imikhiqizo. Futhi ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi isidlo esihlukile.
Sinikeza iresiphi indlela ukulungiselela ukholifulawa. Lokhu isaladi ibhalwe ngokushesha futhi iqukethe eziningi amavithamini ewusizo. Ukuze wenze lokhu, Bilisa cauliflower, zezikhali kube florets. Pheka kancane, ukugcina zonke amavithamini. Kulabo ubambe kuphela ukudla okunempilo, ungavele uyibeka emanzini ashisayo kakhulu isikhashana. Beka iklabishi endishini isaladi bese wengeza ukuba amantongomane oqoshiwe, kanye namakhambi. Nuts kungathatha ikhona, ngokuzikhethela kwayo okugcwele. Imifino futhi ukuthatha noma yisiphi. Engeza amafutha noma amafutha omnqumo uhlanganise. Lokhu isaladi iyasiza.
ungakwazi ukulungiselela isidlo esilandelayo abathandi ukudla okubabayo. Thatha ukholifulawa kanye ukuhlwaya kube florets. Khona-ke ubilise imizuzu 5-7, engasekho. Yengeza usawoti, upelepele obomvu, amafutha yemifino kanye uviniga kancane. Ungakwazi ukukuthinta a izaqathe kancane eside ibe izicezu, enezele isaladi. Zonke ukuxuba kahle. Ukuze anikeze isidlo umbala enhle, ungakwazi ukwengeza liqhakaze. Zonke ukuxuba kahle futhi usinike phisa. Kulesi isidlo kungabuye uthathe izicezu kanye pepper abukhali futhi engeza amakhambi (iparsley cilantro).
I izitolo unyaka wonke ithengiswe imifino eqandisiwe. Indlela ukupheka ukholifulawa eqandisiwe? Ubuchwepheshe cishe ezifanayo. Kunemibono eminingana. Abanye basikisela zangaphambi eneqhwa iklabishi ekamelweni lokushisa bese ubilise imizuzu 5-7. Okunye wazi ngokushesha simisiwe iklabishi nokujikijela ngamanzi thumba abilayo imizuzu 10-12. Mhlawumbe ukhetho lwesibili kungcono.
I ewusizo kunazo etholakala imifino kuphekwe in a kubhayela double. Okwenziwe ngakho ukugcina okwengeziwe izakhiwo yokudla okunempilo kanye amavithamini. Abaningi uyazibuza indlela ukupheka ukholifulawa in umkhumbi, futhi okubaluleke kakhulu, kangakanani? Encwadini kubhayela double silungiselela iklabishi imizuzu 8. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukuthola futhi ukusebenzisa ekulungiseleleni inkambo main.
Ukholifulawa iyasiza umzimba. Into eyinhloko ukulungiselela kahle.
Iseluleko sendlela amanzi okugqumisa mackerel ekhaya
Ladder e cottage esitezi sokuqala: incazelo, izinhlobo, tinkhulumo, kanye nomklamo izincomo